Maitiro Ekuita Edge Kugara Yakavhurika neako Akambovhura Matabo
Muri pano: musha / System Admin / Windows / Maitiro Ekuita Edge Kugara Yakavhurika neako Akambovhura Matabo
Paunenge uchitsvaga neMicrosoft Edge, iwe dzimwe nguva unofanirwa kutangazve muchina wako kana kubuda kunze uchiri pakati pebasa rakakosha kana maitiro ekutsvaga. Neraki, pane nzira yekuudza Edge kuti iwe unoda kuchengetedza ako ese tabo uye kuvhurazve iwo inotevera nguva yaunotangazve. Heano maitiro ekumisa.
Kutanga, vhura Edge. Mune chero hwindo, tsvaga iyo ellipses bhatani (matatu madota) mukona yepamusoro-kurudyi wobva wadzvanya pairi. Mune menyu inowoneka, sarudza "Zvirongwa."
Kana iyo "Zvirongwa" tab ikavhura, tinya "Pakutanga" mubato repadivi.
Mugadziriro "Pakutanga", sarudza "Enderera kwawakasiira."
Tevere, vhara iyo "Zvirongwa" tab. Nguva inotevera paunovhara uye wotangazve Edge, matabhu ako anenge ari chaipo pawakavasiya.
Uye kana uchida gara uchivhura iwo akafanana mapeji emapeji nguva dzese paunovhura Edge, dzokera kuZvirongwa> Pakutanga uye sarudza "Vhura peji chairo kana mapeji" kubva pane chinyorwa chawakangoshanyira. Pazasi peizvozvo, iwe unozogona kuseta chero iwo mapeji iwe aunogara uchida kuona kana uchitanga Edge.
Ungachinja sei dhisiki rekutanga pane yako Apple silicon Mac komputa
Mashandisiro Ekushandisa Vertical Tabs MuMicrosoft Edge
3 Nzira dzekuvanza MaPeji Akajeka eMagetsi App In Windows 10
Filed Under: Windows Tagged With: Microsoft Edge, Zvirongwa (Windows)